𝐒𝐢𝐫𝐧𝐢 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐚𝐥𝐢𝐳𝐢𝐦𝐢𝐢 𝐛𝐢𝐲𝐲𝐚 𝐤𝐚𝐧𝐚𝐚 𝐝𝐢𝐢𝐠𝐚𝐦𝐚𝐚 𝐣𝐢𝐫𝐚𝐚𝐜𝐡𝐮𝐮 𝐢𝐬𝐚𝐚𝐭𝐢𝐢𝐟 𝐫𝐚𝐠𝐚𝐚𝐥𝐞𝐞𝐧 𝐦𝐮𝐥’𝐢𝐬𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐝𝐝𝐮𝐮 𝐝𝐡𝐚. | Kichuu
𝐒𝐢𝐫𝐧𝐢 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐚𝐥𝐢𝐳𝐢𝐦𝐢𝐢 𝐛𝐢𝐲𝐲𝐚 𝐤𝐚𝐧𝐚𝐚 𝐝𝐢𝐢𝐠𝐚𝐦𝐚𝐚 𝐣𝐢𝐫𝐚𝐚𝐜𝐡𝐮𝐮 𝐢𝐬𝐚𝐚𝐭𝐢𝐢𝐟 𝐫𝐚𝐠𝐚𝐚𝐥𝐞𝐞𝐧 𝐦𝐮𝐥’𝐢𝐬𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐝𝐝𝐮𝐮 𝐝𝐡𝐚.
Posted on December 17, 2020 by kichuu_admin
𝐒𝐢𝐫𝐧𝐢 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐚𝐥𝐢𝐳𝐢𝐦𝐢𝐢 𝐛𝐢𝐲𝐲𝐚 𝐤𝐚𝐧𝐚𝐚 𝐝𝐢𝐢𝐠𝐚𝐦𝐚𝐚 𝐣𝐢𝐫𝐚𝐚𝐜𝐡𝐮𝐮 𝐢𝐬𝐚𝐚𝐭𝐢𝐢𝐟 𝐫𝐚𝐠𝐚𝐚𝐥𝐞𝐞𝐧 𝐦𝐮𝐥’𝐢𝐬𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐝𝐝𝐮𝐮 𝐝𝐡𝐚. 𝐇𝐞𝐞𝐫𝐚𝐚 𝐟𝐢 𝐒𝐞𝐞𝐫𝐫𝐢 𝐛𝐢𝐲𝐲𝐚 𝐤𝐚𝐧𝐚𝐚𝐬 𝐝𝐮𝐮𝐤𝐮𝐦𝐚 𝐒𝐢𝐫𝐧𝐚 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐚𝐥𝐢𝐳𝐢𝐦𝐢𝐢 𝐢𝐭𝐭𝐮𝐮 𝐛𝐮𝐫𝐤𝐮𝐭𝐚’𝐚𝐚 𝐣𝐢𝐫𝐚𝐧.
[𝐒𝐁𝐎 – 𝐌𝐔𝐃𝐃𝐄 𝟏𝟔,𝟐𝟎𝟐𝟎] Fakkeenyaaf Naannoleen Sirna Federalizimii biyya kanaa jalatti utubamanii jiran hangamuu dhiibbaa fi harka keessa galfannaan jiraatu bulchiinsa mataa isaanii kan qaban mootummoota naannoo of danda’oo dha. Akka naannoo isaaniittis seeraa fi heera baasatanii Federaala jalatti ammoo akka walootti isaan durfaman. Osoo mootummaan Federaalaa jiruu mootummaan naannoo tokkoo, mootummaa naannoo isa biraa keessa harka hin galfatu ture. Dhimma isa tokkoo keessa inni biraan hin seenu ture. Har’a waa hunduu diigamee, Sirni Federaalizimii biyya kanaa maqaafis tahu laaffachuu osoo hin taane diigamee gara baduutti deemaa jira.
Gochi mootummaan naannoo Amaaraa bulchiinsa naannolee biroo kan akka Oromiyaa fi Benishaangul keessa seenee raawwataa jiru Sirni Federaalizimii biyya kanaa diigamuu fi keessa seeninsa bifa kanaa dhorkuuf humna dhabaa jiraachuu isaa agarra. Humni waraana/poolisii naannoo Amaaraa lafoota Oromiyaa daangaa bulchiinsa Amaaraan waldaangessan adda addaa cabsee seenuun ifatti gabaasamaa jira. Karaa Laga Abbayyaa daangaa ce’uun Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Amuruu ganda Dangajaa jedhamu seenuun ummata irratti dhukaasa bananii miidhaa gugurdaa akka dhaqqabsiisan ummatatu dubbataa jira. Manneen gubuun, loon ooffatanii deemuu dha kan ibsamaa jiru.
Kaaba Shaggar karaa Darraa, Lixa Shaggar Onoota Gindabarat, Warra Jaarsoo, Baha Shaggar Onoota Boosatii fi Fantaallee irraan weerarri humna kanaa jiraachuu akka hin oolles dubbatama. Babal’achuu gocha diigumsaa fi weerara akkanaa osoo mootummaan Federaalaa Sirna Federaalizimii jiru bakkatti ittisuu fi heeraa fi seera jiru hojii irra oolchuuf murannoo fi fedha isaa qabaatee kun hin raawwatamu ture.
Hojiin diigumaa fi ummatoota gidduutti waldhabbii fi lola qabsiisuu humni waraanaa/poolisii naannoo Amaaraa kun kan Oromiyaan kan dhaabbate osoo hin taane, mootummaa naannoo Benishaangul waliinis atakaaroo seenee jiraachuu isaa ibsi mootummaan naannoo Benishaangul kaleessa Mudde 15,2020 baase irraa hubachuutu danda’ama. Bulchiinsi Naannoo Benishaangulis deemsi mootummaa naannoo Amaaraa kun hamaa, Sirna Federaalizimii biyya kanaa balaa irra kan buusu ta’uu akeekkachiisuun, humni kun gocha isaa irraa akka dhaabbatu akeekkachiise.
Mootummaan naannoo Amaaraa rakkoo Godina Matakkal keessa jiru gara biraatti harkisuudhaan osoo mootummaan Federaalaa jiruu sana irra tarkaanfatee Matakkal humna waraanaan seenuu fi godinicha qabachuuf dhaadataa jira. Ibsoota nageenya booressan, ummatoota waldura dhaaban adda addaa baasuun dhaadatuu qofa osoo hin taane, qaamota haala naannoo sana keessa jiru waliin tasumaa wal hin beekne, kan akka ABO maqaa dhahuun jibbaa fi akeeka dhokataa qaban ifa godhataa jiran.
Kanaaf, haalli biyyattii keessatti deemaa jiru, addatti sochiin bulchiinsi naannoo Amaaraa fi humni inni hidhachiisee sossoosaa jiru itti jiran biyyattiif balaa, Sirni Federaalizimii biyya kanaa diigamaa jiraachuu isaaf ammoo mallattoo isa guddaa dha. Mootummaan Federaalaa gocha akkanaa dhaabuuf humna dhabuun, dhaabbadhu jedhamee yeroon itti dubbatuu hanqatuun sirnichi humna dhabaa jiraachuu qofa osoo hin taane diigamaa jiraachuu agarsiisa.
Deemsi kun sirna duraanii kan Itophiyaa dullattii alaabaa lummuxxii san deebisuuf deemsa itti jiramuuf karaa soquuf duula beekamtii qaamota adda addaan deggeramuu dha kanneen jedhan hedduu dha.
Abbaan jabaatee qe’ee isaa haa eeggatu; mirgaa fi bilisummaas abbaatu barbaaddata.
𝗛𝗔𝗬𝗬𝗨-𝗗𝗨𝗥𝗘𝗘𝗡 𝗔𝗕𝗢 𝗝𝗔𝗔𝗟 𝗗𝗔𝗔𝗪𝗨𝗗 𝗜𝗕𝗦𝗔𝗔 𝗛𝗜𝗡 𝗛𝗜𝗗𝗛𝗔𝗠𝗡𝗘
[𝗦𝗕𝗢 – 𝗠𝗨𝗗𝗗𝗘 𝟭𝟲,𝟮𝟬𝟮𝟬] Hayyu-Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa haga ammaatti nagaa qabu; mana jireenyaa isaaniitti argamu. Qabsoo Bilisummaa sabaa irra waan jiramuuf wanti fedhe yo dhufe waan nama dhaamochiisu hin jiru. Jaal Daawud kana tolchanii beeku; kanattis amanu. Wanti ejjennaa isaanii irraa if booda isaan deebisus hin jiru.
Kanas tahe sana, Jaal Daawud Ibsaa mana isaaniitti argamu. Ololli maqaa isaanii dhahatee sa’aa ammaa kana akka waan hidhamaniitti deemaa jiru garuu dhugaa miti.
Ololli kun maaf qindeessamee gadhiisame isa jedhu keessa isaa gaggalagalchanii ilaaluunis hin badu. Ammoo Oromoon qabsoo mirga isaa kabajsiifachuuf godhu irraa sekondiif illee dagamuu hin qabu. Hidhaas, ajjechaas, dhiitamiinsa mirgaas kan xumura itti godhu qabsoo waan ta’eef.